Al-shabaab oo qaraxyo ismiidaamin ah ku qaaday deegaanka Goofgaduud – Radio Daljir
Noofember 30, 2018 9:01 b 0
Wararka Radio Daljir ka helayo deegaanka Goofgaduud ee gobolka Bay ayaa sheegaya in halkaasi saaka waabarigii kooxda Al-shabaab ay ku qaaden weerar ismiidaamin iyo mid toos ah ba saldhigyo ciidamada dowladda ay ku lahaayeen deegaanka.
Dadka deegaanka ayaa noo xaqiijiyay in ay indhahooda saareen ciidamo farabadn oo meyd ah oo daadsanaa saldhigyadii ay Al-Shabaab qabsadeen saaka.
Al-Shabaab ayaa dhowr jiho ka soo weeraray deegaanka, waxaan jahwareer iyo kala carar ku dhacay ciidamadii ku sugnaa saldhigyadii la soo weeraray.
Ma aha weerarkan kii u horeeyay oo noociisa ah, balse waxaa jiray weeraro noocan oo kale ah oo ay Al-Shabaab ku soo qaadeen ciidamada dowladda, balse aysan wax cashar ah ka baran.
Lama xaqiijin karo ilaa iyo haatan khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay weerarkan. Madaxda DFS ayaan ayaguna weli ka jawaabin weerarka saaka iyo waxa sababay habacsanaanta ciidamada DFS.
Daljir kala soco faah faainta warkan.